Recep Tayyip Erdoğan oo lacagta uu DF Somalia siiyo lagula dheggan yahay - Caasimada Online
Home Warar Recep Tayyip Erdoğan oo lacagta uu DF Somalia siiyo lagula dheggan yahay
Recep Tayyip Erdoğan oo lacagta uu DF Somalia siiyo lagula dheggan yahay
Istanbul (Caasimada Online) – Xisbiga Mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa dalbaday inuu Ra’isul-wasaaraha dalkaasi faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo Miisaaniyadda Lacagaha sida tooska loogu taageero Dowladda Somalia.
Ku-xigeenka Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga ee (CHP) ayaa weydiistay Barlamaanka inay u yeeraan Ra’isul-wasaaraha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, si su’aallo toos ah looga weydiiyo Miisaaniyadda Lacagaha ee sida tooska loogu diro Dowladda Somalia.
Ku-xigeenka Xisbiga CHP, Faaruuq Logoglu ayaa sheegay in loo baahan yahay inuu Ra’isul-wasaaruhu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo Lacagaha tooska loogu diro Dowladda Somalia oo halgan adag ugu jirta Dib-u-dhiska dalka oo ay dagaallo ka socdeen in ka badan 20-sanno.
Ku-xigeenka Guddoomiyaha Xisbiga ugu weyn ee mucaardka dalka Turkiga, Faaruuq Logoglu ayaa waxa su’aalaha uu weydiinayo inuu Ra’isul-wasaaraha Turkiga ka jawaabo ayaa kala ahaa:- Waa imisa cadadka miisaniyadda lacageed ee Somalia lagu taageeray muddadii u dhexeysay 2012 ilaa 2013 ? Waa imisa miisaaniyadda sida tooska ah loogu diro Dowladda Somalia? Waa maxay sababaha loo jaray lacagaha sida tooska loogu diri jirey Somalia dabayaaqadii sannadkii hore ee 2013-kii ? Xaggee ka timaadaa Miisaaniyad lacageed ee sida tooska loogu diro dalka Somalia.
Saraakiil ka tirsan Dowladaha Turkiga iyo Somalia ayaa toddobaadkii hore u sheegay Wakaalladda Wararka ee Reuters in Taageeraddii dhaqaalaha ee la siin jirey Dowladda Somalia la joojiyey dabayaaqadii sanndkii hore ee 2013-kii iyo inaysan jirin wax qorshe ah oo si dhaqso leh loogu bilaabayo Kaalmadaasi.
Laakiin, Dowladda Turkiga ayaa ugu dambeyntii si rasmi ah u shaacisay inay sii wadayaan taageeradda lacageed ee ay Dowladda Federalka ku taageeri jireen.
Ra’isul-wasaaraha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan ayaa noqday Hoggaamiyihii ugu horreeyey oo aan Afrikaan ahayn oo booqasho ku yimaada dalkeenna 20-kii sannadood ee la soo dhaafay.
Ra’isul-wasaare Ordagan waxa uu dalkeenna yimid sannadkii 2011-kii oo ay ka jirtay macluul aad u badan, waxaana safarkiisa kadib Somalia soo gaaray kaalmooyinkii uga badnaa ee ay Dowladda iyo Shirkadaha Turkiga soo diraan.
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Somalia, C/salaam Cumar oo xilkaasi hayey muddo 7-bilood oo keliya ayaa sheegay inay Dowladda Turkiga ugu deeqdo Dowladda Somalia bishiiba lacag dhan 4.5 million oo Dollar.